Nchịkọta mkpuru akwụkwọ maka ibu arọ, abụba na-ere ọkụ
Dịka ọ dị na mbụ, taa, na ọrịa ọ bụla na mgbanwe ndị ọzọ na-adịghị mma na ahụ, ọ nabatara ịlụ ọgụ site na nkà mmụta ọdịnala na omenala. N'ihe banyere ịdalata, ụzọ omenala bụ egwuregwu na ihe oriri na-edozi ahụ, na ọgwụ ndị ọkachamara na-abụghị omenala. Ị nwere ike iji aka gị mee nchịkọta mkpuru akwụkwọ maka mgbatị dị arọ, abụba na-ere ọkụ, ịmata ihe mmetụta ha nwere n'ahụ.
Herbs na-ereba abụba n'anụ ahụ
Site n'ụzọ ha si emetụta ahụ mmadụ, ha kewara n'ime ụdị ise:
enwe mmetụta nke agụụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-enwe ike ịmalite olu ha n'ime akụkụ nke tract digestive, si otú ahụ na-ezigara ụbụrụ ụbụrụ banyere ụbụrụ nke ahụ, ma ọdịnaya caloric dị ala adịghị ekwe ka e nwee oke abụba. Ndị a gụnyere mkpụrụ flax, spirulina algae, althea mgbọrọgwụ;
Akwụsịghị na mmiri ahụ. Mmetụta diuretic bụ bearish ntị, burdock, nkedo lingonberry, kranberị;
nke nwere mmetụta dị mma. Mkpuru akwụkwọ ndị a na-eme ka ọnyá peristalsis na-eme ka ọkpụkpụ eriri afọ na, na ngwaahịa nke ọrụ dị oké mkpa, wepụ ụdọ na toxins na ya. Ndị a na-agụnye senna na buckthorn, mkpụrụ, mkpụrụ osisi anise, ahịhịa ndụ;
nke nwere mmetụta choleretic. N'ihi ikike nke ịmepụta breeze secretion, usoro nri mgbaze, metabolism na metabolism mma. Ndị a gụnyere barberry, dandelion, immortelle;
na-eme ka a na-etinye ume. Ha nwere ihe omuma ihe omuma, nke meziwanye ihe nkenke ihe. Anyị na-ekwu maka ọgwụ ndị dị otú ahụ dị ka onye òtù ọlụlụ, tii tii, ose cayenne, turmeric , ginger.
N'ime ntụziaka ndị kachasị ewu ewu maka mkpuru akwụkwọ maka ụkọ ihe na abụba na-ere ọkụ, ị nwere ike ịchọta ndị nwere otu nke abụọ na nke ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike imebi nchịkọta site na mgbọrọgwụ nke althaea, burdock, dill, dandelion na di ma ọ bụ nwunye. Ọ bụrụ na achọrọ, tinye "peppercorn", dịka ọmụmaatụ, ntakịrị ginger ma ọ bụ ose. Mgbe ị na-akwadebe ihe ọṅụṅụ na-agwọ ọrịa, a pụrụ ịkọkọta mkpokọta ahụ dị ka tii, na-ewere ihe ndị dị na ya hà, ma ị nwere ike tinye ya na mmiri na-asa mmiri na nkeji nkeji otu awa. Were ahihia nke na-agba abụba, ọkara otu iko ugboro atọ n'ụbọchị tupu nri.
Otú ọ dị, ọ ghaghị iburu n'obi na osisi ndị na-ere abụba n'anụ ahụ nwere ike inwe mmetụta ndị na-adịghị adabara onye ọ bụla. Ọ dị mkpa iji nlezianya gụọ ntụziaka dị na igbe ahụ na ngwaọrụ, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, jụọ onye herbalist.
Kọfị kọfị - mejupụtara
Magnesia maka ụkọ ọnwụ bụ uru na nsogbu nke usoro ahụ
Vitaklin maka ụkọ ọnwụ
Kedu ka esi ewe Clenbuterol maka ọnwụ ọnwụ?
Kọfị kọfị: ọkachamara nyocha
Mistletoe na-acha ọcha maka ọnwụ
Kedu ka esi eme ka ụkwụ gị na-acha?
Ihe nkedo maka idalata
Mkpụrụ osisi mustard-honey na-etinye aka maka ọnwụ
Fitbol maka ọnwụ ọnwụ
Shish kebab na oven na aka aka maka mmiri
Nkume akụrụ - ihe kpatara nhazi
Katidral nke Virgin Mary Ngọzi (Tromsø)
Kedu ka ị ga esi kwụsị iji onwe gị atụnyere ndị ọzọ?
Lycopid maka ụmụaka
Pelvic nwa ebu n'afọ
Njedebe Ịhụnanya: Martin Freeman na Amanda Abbington kewara ụzọ
Nri zucchini na akwụkwọ nri
Ọrịa nke ikpu
Ọrịa ọmịiko - mgbaàmà
Dessert nke ugu
Beef Stroganoff na Ọkachamara
Quentin Tarantino "kpụrụ" kpakpando ya na Hollywood Walk of Fame
Frontitis - ọgwụgwọ na ndị okenye
Anụ ọhịa - ntụziaka nri
Brooklyn Beckham na Chloe Moretz nwere obi ụtọ ọzọ
Kedu mgbe a na - akwụ ụgwọ - mgbe ị na - abịa ma ọ bụ mgbe ọ gasịrị?
25 foto ndị mere eme
Elsa Pataki na Chris Hemsworth gosiri mmasi na osimiri dị n'Australia
Kate Middleton dị ike na-ejide ya na nnukwu ụlọ ahịa